ထိုင်းနှစ်ကုန်ဈေးရောင်းပွဲတော်များတွင် ကုန်သည်များအခွန်ရှောင်၍ အစိုးရအခွန်ငွေများဆုံး? - Yangon Media Group
ဘန်ကောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဈေးဝယ်စင်တာကြီးများ၏ နှစ်ကုန်အထူးဈေး ရောင်းပွဲများတွင် အမြတ်များစွာရရှိသော်လည်း အခွန်ရှောင်သူများ ရှိနေ၍ အစိုးရတွင် ဘတ် ၁ဝ ဘီလီယံခန့်ဆုံးရှုံးနေရသည်ဟု ထိုင်း အစိုးရဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်သတင်းများအရ သိရသည်။
ဈေးဝယ်စင်တာကြီးများ အခွန်ရှောင်မှုအားစာရင်းပြုစုထားပြီး နောင်နှစ်များ၌ ထိရောက်စွာ အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာက ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။ အခွန်အပြည့်အဝရရှိကောက်ယူနိုင် မည့် နည်းလမ်းများကို ထိုင်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခွန်ဦးစီး ဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
အခွန်ဆောင်သူများသည် ပြည်တွင်း၌ မိမိတို့ကုန်စည်နှင့်ဝန် ဆောင်မှုဝယ်ရင်းဈေးနှင့် အမှန်တကယ်ကုန်ကျငွေများမှ ဘတ် ၁၅ဝဝဝ အထိ အချိုးကျနုတ်ယူခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ရောင်းသူများသည် စားသုံးသူများအား အခွန်ဆောင်ပြီးပြေစာများပေးရမည်ဟု အစိုးရ ကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ပြေစာများပေး၊ မပေးကိုလည်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအတွင်း အာဏာပိုင်များက တောင်းယူစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းအခွန်ဦးစီးဌာနသည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က အခွန်ငွေဘတ် ၇ဝ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး ယင်းသည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အခွန်ရရှိငွေထက် ဘတ် ၃၈ ဘီလီယံပိုမိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်ရှိ မြောက်ကိုရီးယားစာသင်ကျောင်းများ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
ဖြူးမြို့အနီး အင်အား ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅ ဒသမ သုညရှိ မြေငလျင် ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ငလျင်ဘေးနှင်
ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်ကို လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အား ထူးချွန်စွာကာကွ?
ရွှေပြည်သာ ဖူလုံရေးလုပ်သား ရှစ်သောင်းကျော်အတွက် တတိယမြောက် ဖူလုံရေး-ကဲဝဲလ်ဆေးခန်းသစ် ဖွင်??